EX - ABSDF: ပညာရေး အရေးအကြီးဆုံး
စာဖတ်သူတချို့က ဆောင်းပါးတွေရေးတဲ့အခါ ဘာကိုအခြေခံပြီး ဘယ်အမြင်နဲ့ ရေးသလဲလို့ ကျွန်တော့်ကို မေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်က တိုင်းရင်းသားပြည်သူ လူထုအကျိုးစီးပွားကို အခြေခံပြီးရေးတယ်လို့ ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ပြည်သူလူထု အကျိုးစီး ပွားဆိုရာမှာ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေး အကျိုးစီးပွား အခြေခံပါ။
အဲဒီအထဲကမှ ပညာရေးကို ကျွန်တော်က နံပါတ်(၁)ထားပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကိုဖြစ်စေ၊မိသားစုတစ်စုရဲ့အခြေ အနေ ကို ဖြစ်စေ၊ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာကိုဖြစ်စေ ပညာရေးက အဓိကအဆုံးအဖြတ် ဖြစ်စေတယ်လို့ ကျွန်တော်ကခံယူပါတယ် ။ကျန်တဲ့အချက်အလက် အားလုံးဟာ ပညာရေးနဲ့ဆက်စပ်ပြီး အပြန်အလှန်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်စေတယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဆောင်းပါးရေးရင် ပြည်သူလူထုပညာရေး အကျိုးစီးပွားကို အခြေခံကျကျစဉ်းစားပြီး ရေးပါတယ်။
မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့တိုင်း မိသားစုပညာရေးကို အလေးထားဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘ၀မှာလည်း ပြောသလို နေထိုင်လုပ်ကိုင် ပြုမူပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ် ပညာရေးအကြောင်း ဆွေးနွေး ကြည့်ရအောင်ပါ။
လက်ရှိ နိုင်ငံရေးပြဿနာအကြောင်းကိုပဲ အရင်ကြည့်ရအောင်ပါ။ မြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရဖို့ တောင်းဆိုကြပါတယ်။ တောထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေက လက်နက်ကိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တောင်း ဆိုကြပါတယ်။ ဒါလည်း ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆို တာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာဘာလဲ၊ ဒီမိုက ရေစီကို ဘာလို့ တောင်းဆိုရတာလဲဆိုတာ ရှင်းလင်းဖို့လိုလာပါတယ်။ အားလုံးနားလည်ကြမှာပါ။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အများသဘောနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကို ဆိုလိုတာပါ။ အာဏာရှင် တစ်ဦးတစ်ယောက် က သူ့စိတ်တိုင်းကျ ထင်သလို စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်နေမယ်ဆိုရင် သူ့ဘာသာသူဘယ်လောက်ပဲ စေတနာ ကောင်းတယ် ပြောနေပြောနေ၊ တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးမှုမရှိဘူးဆိုရင် ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀၊ အားလုံးရဲ့ဘ၀ နိမ့်ကျ ရတာပါပဲ။ ဒီအတွက် ပြည်သူလူထုဘ၀ မြင့် မားလာအောင် တိုင်းပြည်ကို တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်းက မအုပ်ချုပ်ဘဲ အများ သဘောဆန်္ဒအတိုင်း စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ အများ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးအောင် တောင်းဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်။ လွယ် သလားဆိုတော့ မလွယ်ပါဘူး။
ကောင်းပါပြီ။ လွယ်သာမ လွယ်တာ ဒီမိုကရေစီ ရလာရင် တိုင်းပြည် ဘယ်လောက် တိုးတက် လာမလဲဆို တာကိုလည်း မေးခွန်း ထုတ်စရာပါ။ အာဏာ ရှင်စနစ် ထက်သာမှာတော့ ဗေဒင်မေး စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လောက် အဆင့် အတန်းရှိသလဲ ဆိုတဲ့ ပြဿနာ ရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို အမှန်တကယ်ကျင့်သုံးပြီး၊ အဲဒီဒီမိုကရေစီဘယ်လော က်အဆင့်အတန်းမြင့်တယ် မမြင့်ဘူးဆို တာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ ပညာရေး ရေချိန် ကအဆုံးအဖြတ် ပေးမှာဖြစ် ပါတယ်။ ကမ်္ဘာပေါ်မှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ အဆင့်အတန်း ချင်း မတူပါးဘူး။ အကြောင်းကတော့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်နဲ့ တစ်ပြည်က တိုင်းသူပြည်သား တွေရဲ့ ပညာအဆင့်အတန်း မတူ တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ အလွယ်ကူဆုံးဥပမာတစ်ခုပေးစရာရှိပါတယ်။ လက်ရှိ အစ္စရေး နဲ့ စစ်ဖြစ်ပြီး အပစ်အခတ် ရပ်လိုက်တဲ့ ပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသဆိုပါတော့။ သူ့မှာ လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဒေသမှာ ပါလက်စတိုင်း ပြည် သူတွေ မဲပေးရွေးချယ်လိုက်တာဟာ “ဟားမာ့စ်” ဆိုတဲ့အဖွဲ့ အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ကို အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း အကြမ်း ဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ သူ့အဖွဲ့ရဲ့ မူဝါဒဟာ အစ္စရေးကို တိုက်မယ်၊ ခိုက်မယ်၊ ပင်လယ်ထဲ ကန်ချမယ် ဆိုတဲ့ အစွန်း ရောက်အယူအဆ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ အဓိကလုပ်တာက ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အချိန်လက်နက်တွေစုဆောင်း မယ်၊ အစ္စရေးဘက်ကို မကောင်းသူထိပ်၊ ကောင်းသူထိပ်ပစ်ဖို့ ပါလက်စတိုင်း အရပ်သားတွေ နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် မြေအောက်မှာ ရွေ့လျား ဒုံးပစ်စင်တွေဆောက်မယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ အဲဒီ ဒုံးပစ်စင်တွေနဲ့ အစ္စရေးအရပ်ဘက်ပစ်မှတ် တွေကို ပစ်မယ်၊ အစ္စရေးလူမျိုးတွေကို ရန် ရှာမယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။ ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူတွေရဲ့ ပညာရေး၊စီးပွားရေးဟာ နံပါတ်(၁) မဟုတ်ပါဘူး။
အခုနောက်ဆုံး အစ္စရေးနဲ့ စစ်ပွဲမှာ ပါလက်စတိုင်း စစ်သားနဲ့ ပြည်သူ ၂,၀၀၀ ကျော်သေ၊ နေအိမ်တိုက်တာ အဆောက်အအုံအ များကြီး ဖျက်ဆီးခံရတာတောင် သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲလို့ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုး ပါ။ အဲဒါ ဂါဇာကပါလက်စတိုင်းပြည်သူ တွေကိုမဲပေး ခိုင်းရင် အစ္စရေးကို ချမယ်၊ နှက်မယ် ဆိုတဲ့ အဲဒီဟား မားစ်အဖွဲ့ပဲ မဲရ မှာပါပဲ။ ဒါဟာ အဲဒီဒေသက ဒီမိုကရေစီ အဆင့်အတန်းပါပဲ။ အဲဒီ ဒီမိုကရေစီ တန်ဖိုးကို ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူတွေရဲ့ ပညာရေးက အဆုံးအဖြတ်ပေးတယ်လို့ ကျွန်တော် သုံးသပ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီသာ တကယ်ရရင် အဲဒီ ဒိမိုကရေစီရဲ့အဆင့်အတန်းကို ပြည်သူတွေရဲ့ ပညာရေးကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ၊ တော်လှန်ရေးတွေ လုပ်ရာမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ပညာရေးအဆင့် အတန်းက အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို ဒီမိုကရေစီ မရသေး၊ ပွင့်လင်းစ ပြုလာတဲ့ အခြေအနေမှာတောင် ပြည်သူတွေ ရဲ့ပညာရေးဟာ နေရာ တကာ အဆုံးအဖြတ်ပေးနေပါတယ်။ အမျိုးသားရေးနဲ့ ဘာသာရေးအ စွန်းရောက် ပြဿနာ၊ ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်းနဲ့ နတ် နဂါးတွေကိစ်္စ၊ အုပ်ချုပ်ရေး စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အားလုံးမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ပညာရေးက အဆုံးအဖြတ် ပေးနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီပဲ တောင်းဆို တောင်းဆို၊ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးပဲ လုပ်လုပ်၊ အရေးအကြီးဆုံးဟာ အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုရဲ့ ပညာရေးတိုးတက်သထက် တိုးတက် လာဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်လို အခြေအနေရောက်ရော က်ဘယ်လောက် အခက်အခဲ ကြုံကြုံ အဲလိုတိုးတက် လာဖို့ကိုလည်း အစီအစဉ်ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စ ကရင့်တော်လှန်ရေး ထဲက အတိုးတက်ဆုံး အမြင်အကျယ်ဆုံး ခေါင်းဆောင်တွေထဲက တစ်ယောက်နဲ့ ဆွေးနွေးဖူးပါတယ်။ သူက အခုလက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲကာလကို ဖြတ်သန်းနေရတယ်၊ ပညာရေးကိစ္စ ဒီလောက်ရှေ့တန်းမ တင်နိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ စစ်အစိုးရကို ဘယ်လို တပ်သားတွေတပ်မှူး တွေနဲ့ တိုက်မှာလဲ၊ ဘယ်လို ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့ တိုက် မှာလဲ၊ အဲဒီ တပ်ဖွဲ့ဝင် တွေ ပြည်သူတွေ ပညာရေးနိမ့်နေရင် စစ်အစိုးရကို ထိထိရောက်ရောက် တိုက်နိုင် မှာလား၊ ကရင့်အကျိုး စီးပွား ဖော်ဆောင် နိုင်မလား စသဖြင့် ပြန်ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တောထဲမှာတိုက်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူ သည်ဖြစ်စေ၊ အချိန်တိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ပညာရေးရေချိန်ဟာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တစ်ရက် ထက်တစ်ရက် မြင့်မားလာဖို့ လိုတယ်၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပြည်သူတွေ အဲလို ခံယူလာအောင် အဖွဲ့အစည်းက ဦးဆောင် လှုံ့ဆော်ပေး ရမှာ ဖြစ်ပြီး အခြေအနေပေးသလောက် လိုအပ်တာတွေ အကောင်အထည် ဖော်ပေးရမယ် လို့ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
( နောက်တစ်ပတ် စနေ- ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်န်အယ်လ်ဒီအပေါ် ဝေဖန်ချက်နဲ့ ပညာရေးနဲ့ပတ် သက်လို့ ကိုယ်တိုင်ရုန်း ကန် ကျင့်သုံးခဲ့တာ ပြောပြ ပါ့မယ် )
စည်သူအောင်မြင့် ( မဇ္ဈိမ )
Posted by lu bo at 11:12 AM
by Htay Tint on Tuesday, March 6, 2012 at 3:42pm · သို./ ညီမလေး နန်းအောင်ထွေးကြည်၊ အကို ဟာ ကိုထိန်လင်းတို့ အောင်မိုးဝင်း တို. ရေး...
စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် ..
Myint Aung and2other people shared Jay Ki 's photo . မာတိကာ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန် အပေါ်ပိုင်း တွင် အမျိုးအစားလိုက်ရှာနိုင်ပြီး...
Tin Nyunt စင်ကာပူကို နောက် နှစ် ၂၀ မှာ ကျော်ဖို့ဆိုတော့ စင်ကာပူလို စည်းကမ်းရှိဖို့၊ ဥပဒေလိုက်နာဖို့တော့ လိုမယ် ထင်တယ်ဗျ။ လုပ်ချင်တိုင်...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၇-၇)
သစ်ထူးလွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစည်းအဝေးခေတ္တနားချိန်မှာ သတင်းသမားများနှင့် တွေ့ ဆုံ (ရုပ်/သံ) ဒုတိယသမ္မတ အမည်စာရင်းတင်ဖို.ကတော့မသေခ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၀-၇)
သစ်ထူးလွင် စိုက်ပျိုးရေး ကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုကို ကျေးရွာ ၉ရွာမှ လယ်သမားများက ဆန္ဒပြ ဗန်းမော် ရှပ်ပြေးယာဉ် တိမ်းမှောက်မှု နောက်ဆုံးရသတင်း ဗန...
by Nyo Nyo Mar on Friday, June 8, 2012 at 6:41am ဖွဲ့ဖြိုးစ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဆိုသောအသုံးအနှုန်းကို ဖွံ့ဖြိုးမှု အလွန်နောက်ကျသော နိုင်...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် ထူးခြားသော ၀ိေ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၃၀-၈)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၈-၂၉)
ပဲခူးရိုးမပေါ်မှ မစိမ်းလန်းသောဘ၀များ (၁)
သတိထားကြပါ၊ ငါးရံ့ခြောက်မှာ ပိုးသတ်ဆေးသုံးနေကြပြီ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၈)
ဂျပန်တွေမသိတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ အကြောင်း
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၇-၈)
ပြည်ပအကူအညီနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ခင်မောင်ညို (...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၆-၈)
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု လုံးဝမရှိတဲ့ ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမ...
နေပျော်တဲ့ မြို့ပြများဖြစ်ရေး ဒို့အရေး
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၅-၈)
``ရခိုင်ပြည်က အကူအညီ`` ဒီဘိတ်
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၄-၈)
........ လုံလောက်ပြီ။ ။
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၃-၈)
ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခြ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၂-၈)
အချိန်အခါအလိုက် အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သော ပုတ်သင်ညို...
သမီးတော် ရာဇဝင် ( ၈ )
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၁-၈)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၀-၈)
အမေရိကား အတွေ့အကြုံ (၁)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၈-၈)
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး (သို့) အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၇-၈)
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကို ကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၈ဝ ရလိုမှုဖြင့်...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၆-၈)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၅-၈)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၄-၈)
အခန်း(၄၇) “ဇာတ်တူသားကို စားကြသူများ”
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၃-၈)
"တိမ်ကိုစီး၍ သစ္စာရှာသူ..." ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး)
•• သမီးတော်ရာဇဝင် ( ၇ ) ••
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၂-၈)
((((((((((( လစ်ဘရယ်အိပ်မက်မှ နိုးတ၀က်၊ မနိုးတ၀က် ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု ( ၁၁-၈)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၀-၈)
၈ လေးလုံးကာလ ဘီဘီစီအသံလှိုင်းများအကြား ဖြတ်သန်းခဲ့သ...
၈၈-ဆိုတာဒီလိုရှိတယ် ~~~ ငါ့ညီ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၉-၈)
ဒါဖတ်ပြီးမှ အကြမ်းဖက်ဖို့ စဉ်းစားပါ ဘာသာရေးပဋိပက္ခမ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၈-၈)
လူဦးရေ ၈ သန်း၊ ပျော်တော်ဆက်မယ် တစ်သိန်းနှင့် မြို...
`` ရော့ခ်သီချင်းနဲ့ ပုတီးစိပ်တဲ့သမီးတော် ´´
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၇-၈)
"တောင်သူတွေနစ် တိုင်းပြည်လည်းနစ်" (ထောင်ထဲမှာလယ်သမ...
“အိန္ဒိယနဲ့ အာဆီယံကို ဦးတည်လာတဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒ”)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၆-၈)
" သူရဲကောင်းတို့ တိုင်းပြည် "
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၅-၈)
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲ နဲ့ Prof. Steinberg ရဲ့  အမြင်အ...
ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးထက် စိတ်ဓာတ်ပိုဆိုးနေကြပြီလား...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၄-၈)
ရွေးကောက်ပွဲ ပုံပြင် (၁)
ဘီလျံနာတဲ့လား ( အကြည်တော် )
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၃-၈)
ဘယ်တော့မှ မသေတဲ့ .. ၈၈၈၈
နှစ်ထောင့်ရှစ်ဆယ့် လေး ။ ။ စတုတ္ထအသုတ်
မင်းသိင်္ခ မှားရင် လျှာဖြတ်၊ ဂိုဘီ သဲကန္တာရထဲ ပစ်
“အချောင်သမားဝါဒနဲ့ ကိုအောင်ဆန်းပြောတဲ့ ကျောင်းသားထ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂-၈)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁-၈)
အာရှတိုက်နိုင်ငံများသို့ခြေဆန့် လာသော EBOLA (သို့)...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၃၁-၇)